Zvapupu zvaJehovha Isangano Rakatangwa Nemunhu Here? | Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kannada Kikamba Kikaonde Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mixe (North Central) Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Kwete, Zvapupu zvaJehovha harisi sangano rakatangwa nemunhu. Tiri vaKristu vanoedza nepose pavanogona kutevedzera mararamiro aiitwa naJesu Kristu uye dzidziso dzake.
Sangano rakatangwa nemunhu rakaita sei?
Vanhu vanopa tsanangudzo dzakasiyana-siyana panyaya iyi. Asi ona zvinhu zviviri zvinowanzotaurwa nevanhu nezvemasangano iwayo uye kuti sei isu tichiti takasiyana nemasangano iwayo.
Vamwe vanoti chinenge chiri chitendero chitsva chatangwa. Zvapupu zvaJehovha hazvina kutanga chitendero chitsva. Manamatiro edu akafanana neevaKristu vekutanga-tanga, avo vane mararamiro uye dzidziso zviri muBhaibheri. (2 Timoti 3:16, 17) Tinoti Magwaro Matsvene ndiwo anofanira kutungamirira pane zvose zvine chokuita nokunamata.
Vamwe vanoti chinenge chiri chitendero chinotungamirirwa nemunhu. Zvapupu zvaJehovha hazvina munhu wepanyika wazvinoti ndiye mutungamiriri wazvo. Tinotevedzera zvakataurwa naJesu paakaudza vadzidzi vake kuti: “Mutungamiriri wenyu mumwe chete, iye Kristu.”​—Mateu 23:10.
Isu takasiyana nekure nezvinofungwa nevanhu vanoti sangano redu rakaipa. Chitendero chedu chinobatsira vanhu vose pasinei nokuti tinonamata navo here kana kuti kwete. Somuenzaniso, basa redu rokuparidza rabatsira vanhu vakawanda kuti vasiye zvinhu zvinokanganisa utano zvakadai sokudhakwa uye kushandisa madhiragi nenzira isiri iyo. Uyezve pasi rose, tiri kubatsira zviuru zvevanhu kuti vadzidze kuverenga nokunyora. Uye tinobatsira chaizvo vanenge vawirwa nenjodzi. Tinoedza nepose patinogona kuva nemararamiro akanaka anobatsira vamwe, sekurayira kwakaita Jesu vadzidzi vake.​—Mateu 5:13-16.